Soo -saareyaasha Polymers Sare ee Suuxinta | Shiinaha suuxdinta Polymers High Polymer Factory & Alaab -qeybiyeyaasha
Daboolka Caafimaadka ee La Tuuri Karo
Nuugista Cadaadiska xun
Ku xiridda Kateetarka
1. Waxaa laga sameeyay PVC darajo caafimaad oo aan sun ahayn, DEHP waa bilaash, ur ma leh.
2. Tilmaan jilicsan, caarada caadiga ah, caarada dabka iyo caarada jilicsan ee doorashada.
3. Iyadoo leh 2m tuubo ama la beddeli karo, tuubada ka hortagga burburka ayaa hubin karta in oksijiin la raaco xitaa haddii tuubada la jeexjeexay.
4. Cabbirka la heli karo: Audlt, Carruurta, Dhallaanka, Dhallaanka.
5. Midabka: hufan cagaar, hufan oo cad iyo buluug khafiif ah oo ikhtiyaar ah.
6. Ku xiran baakad shaqsiyeed PE.waxaa ku darsaday gaaska EO, 100 pcs/ctn.
Tuubada Oxygen/Cannula -sanka
Cannula Ogsijiin sanka ah waa aalad Oxygen oo gaadiid leh oo leh laba kanaal, Waxaa loo isticmaalaa in lagu gaarsiiyo oksijiin dheeri ah bukaanka ama qofka u baahan oksijiin dheeraad ah.
Cannulas-ka sanka waxaa loo isticmaalaa bukaanada u baahan kaliya ogsijiin dheeri ah oo dheecaan leh. Bukaanada ay ku adag tahay neefsashada iyo xaaladaha sida emphysema ama cudurada sambabada kale waxay u baahan yihiin cannula sanka. Heerka socodka cannuladu waa agagaarka. 4 ilaa 5 litir daqiiqadii (LPM).
1: Teknolojiyadda Patent -ka ee wax -ka -beddelidda isku -dhafan, xoog sare, oo aan u nuglayn inuu dhaco oo la kala tago, dabacsanaan wanaagsan.
2: Waxay u adkeysan kartaa heerkulka sare iyo jeermiska cadaadiska sare, dib loo isticmaali karo.
3: Isgoysyada waxaa lagu sameeyaa wax -ka -duris duritaan oo aan lahayn daadinta gaaska.
4: Waxaa inta badan loo adeegsadaa bukaannada qalliinka ee suuxdinta iyo oksijiinta; bukaanka ka dib soo kabashada.
5: Taageerida iyo daryeelka bukaanka qaba neefsashada qalliinka kadib.
Goobta Wax -soo -saarka:
1. Waxaa lagu sameeyaa duray caag PS ah, aan sun ahayn, aan xanaaqayn.
2. Waxay ku hagaajin kartaa sida ay doonto, geesaha siman ee ka samaysan caagga balaastigga ah, cabsida bukaanka.
3. Isticmaalka keli ah, madhalays ah haddii baakidhka la furo ama waxyeello gaadhin, oo lagu nadiifiyey oksiten oxide.
4. Cabbirka: L, M, S
5. IFU: Ku rid biilka shinbiraha si tartiib ah siilka, u rog furka si aad u hagaajisid qiyaasaha.
Qolka qalliinka, waaxda qalliinka guud, waaxda neerfaha, waaxda dumarka, waaxda proctology, waaxda urolojiga, waaxda lafaha.
Kateetarka waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo cadaadiska caloosha iyo dheef -shiidka ama dheecaanka.
Kateetarka Cadaadiska xun
Dhaawaca dushiisa deeq -bixiye ama dheecaan ka mid ah dheecaan -ka -goynta kiliiniga.
Qolka qalliinka, waaxda qalliinka guud, waaxda neerfaha, waaxda dumarka, waaxda proctology, waaxda urolojiga iwm.
Loops Silikoon (Gaar ah)
Tilmaamaha iyo faa'iidooyinka Retractor (Gaarka ah):
Jel silica caafimaad ee la soo waarido ayaa la adeegsadaa, sidaa darteed waxaa lagu hormarin karaa raajada. Noocyo kala duwan ayaa dabooli kara baahiyaha kala duwan; Waxaan leenahay cabbirro kala duwan afar midab: buluug, jaalle, casaan iyo caddaan. Markaa unugyada cad -cad ayaa si fudud oo dhaqso leh loo garan karaa; Qaab dhismeedka dheer ee elliptical -ka ah ee naqshadeynta iyo dabacsanaantiisa aadka u weyn ayaa si wax ku ool ah uga hortagi karta waxyeelada ku timaadda unugyada.
Kaateetada Kaadhka Silikoon
Waaxda urolojiga, waaxda qalliinka guud, waaxda neerfaha, waaxda dumarka, waaxda proctology, waaxda lafaha, waaxda carruurta, ICU, qolka qalliinka, waaxda gurmadka, iwm.
Xiritaanka Suture Gresper
Qalabka xidhitaanka goosgooshu wuxuu leeyahay tilmaam gaar ah oo loo isticmaalo sida kor ku xusan. Xaaladdaas. Dhakhtarka qalliinka waxaa ugu fiican in lagula taliyo inuu adeegsado hab kaas oo isaga/iyada u gaar ah iyo ikhtiyaarku u tilmaamayo inuu u fiican yahay bukaanka, oo waafaqsan tilmaamaha iyo iska -hor -imaadyada kor lagu soo sheegay. ma aha tixraac farsamooyinka xiritaanka trocar.